Loza telo an'ny Marketing Affiliate sy ny fomba hisorohana azy ireo | Martech Zone
Ny indostrian'ny Affiliate dia misy arakaraka. Betsaka ny mpilalao, ny sosona ary ny faritra mihetsika. Raha ny sasany amin'ireto nuances ireto no mahatonga ny maodelin'ny Affiliate hanana tokana sy sarobidy, toy ny fampifandraisana ny tambin-karama amin'ny vokatra, misy ny hafa izay tsy dia irina firy. Inona koa no izy, raha tsy mahafantatra azy ireo ny orinasa iray, dia mety hanimba ny marika izy ireo.
Ho an'ireo orinasa hanararaotra amin'ny fomba feno ny fotoana mety sy hiverenany amin'ny fampiasam-bola izay vitan'ny programa afiliana, dia mila mahatakatra sy mahafantatra ireo lafin-javatra sasany sy ny nuansa indostrialy izy ireo. Ireto misy telo tokony hotandremana:
Affiliate izay tsy mamorona lanja
Ny mpiara-miasa dia mpiara-miasa amin'ny varotra. Izy ireo dia ahitana mpamaham-bolongana atiny, tranonkala famerenana, sekoly ary fikambanana, raha tsy hiteny afa-tsy vitsivitsy izy ireo ary mety hahomby amin'ny fampiroboroboana ny vokatra sy serivisy an'ny marika. Ny ankamaroany dia malaza be ary mitondra hatrany ny varotra mihombo ho an'ny marika. Na izany aza, misy ihany koa ireo izay tsy manao izany.
Amin'ny marketing marketing, ny foto-kevitry ny “incrementality” dia manondro ny varotra izay tsy ho azon'ny mpanao dokam-barotra raha tsy nisy ny fandraisana anjaran'ny mpiara-miasa. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny mpiara-miasa dia mitondra mpanjifa vaovao amin'ny orinasa iray.
Ny toerana misy azy io dia rehefa misy orinasa mihevitra fa ny mpiara-miasa rehetra amin'ny programa dia mitarika fivarotana mpanjifa vaovao, raha ny tena izy, misy ireo izay mandray soa voalohany amin'ny ezaky ny mpiara-miasa na fantsona hafa.
Ohatra, ny mpiara-miasa sasany (antsoinay hoe "mpiara-miasa farany") dia mamolavola ny maodelin'izy ireo hanandrana sy hisambotra ny mpanjifa izay efa eo am-pividianana ny fividianana na amin'ny sarety fiantsenana. Amin'ny fanaovana izany dia mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny mpiara-miasa izay mitondra lanja farany ambony ho an'ny marika sy mpanjifa vaovao amin'ny alàlan'ny bilaogin'izy ireo, fantsona media sosialy, tranokala famerenana sns.
Amin'ny alàlan'ny fanakanana ny mpanjifa raha ny fikasan'izy ireo hividy dia efa avo na mahitsy alohan'ny fotoana fivarotana, ireo mpiara-miasa farany dia matetika mahazo trosa amin'ny fifampiraharahana izay kely vitany mba hanombohana na tsy nanolotra sanda fanampiny. Vokatr'izany dia miafara amin'ny fandoavan'ireto komisiona fidiram-bola farany ireto ny orinasa.
Mba hisorohana ity karazana hetsika ambany na ambany amin'ny fandaharana ity dia zava-dehibe ny tsy hanaiky valiny amin'ny sanda-tarehy. Halalino ny tetikadin'ny mpiara-miasa aminao hahafantarana tsara ny fomba fampiroboroboany ny marikao ary diniho ny fandrafetana ny maodelin'ny toetranao ivelany mba tsy hanome valisoa an'ity fihetsika ity.
Affiliate tsy etika
Raha ny ankamaroan'ny mpiara-miasa dia mpiara-miombon'antoka etika izay mitondra lanja lehibe amin'ny orinasa, misy anefa ny paoma ratsy, indrisy. Ireo mpivarotra tsy mahay mandanjalanja ireo dia tsy tokony hafangaro amin'ireo mpiara-miasa aminy izay mety tsy manampy sanda fanampiny. Tsia, ireto karazana mpiara-miasa ireto dia ratsy toetra kokoa. Izy ireo dia manao hetsika ara-barotra mamitaka mba hanangonana komisiona.
Ohatra, tato ho ato lahatsoratra, Dr. Mehmet Oz nizara ny tantarany manokana momba ny fomba fampiasan'ny olona akaiky azy sy ny mpivarotra an-tserasera ny endrik'izy ireo hivarotana sy hampiroboroboana ny acai berry sy vokatra hafa - tsy nahazoana alalana taminy avokoa. Nanjary ratsy dia ratsy ka nametraka ny marika sy ny fahamendrehany. Mba hampifantohana ny sain'ity olana miely patrana ity dia nanolo-tena i Dr. Oz fizarana maromaro amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra momba an'io lohahevitra io, ary manakarama ireo mpanao fanadihadiana tsy miankina mba hahalalana hoe iza ireo olona marketing manjavozavo ireo ary hampianatra ny besinimaro ny fomba hamitahana azy ireo.
Misy ny orinasa mahalala ireo paoma ratsy ireo fa manapotsitra ny masony satria miteraka fidiram-bola ny paikadin'ny marketing. Ny orinasan-tserasera hafa dia tsy mahafantatra akory fa ireo karazana mpiara-miasa ireo dia ao anatin'ny programa na mampiroborobo ny marika amina fomba tsy ara-dalàna na tsy etika. Na eo aza izany, na ny tarehin-javatra na ny taratra dia tsy hita taratra amin'ny orinasa na mampiseho programa mahomby.
Mitovy amin'ny fomba ahafahanao misoroka ny tambin-karama izay tsy manome lanja, ny fisorohana ireo mpikambana tsy etika tsy hiditra ao amin'ny fandaharan'asanao dia mitaky ny hijerenao tsara ny mpiara-miombon'antoka aminao, hanana fahitana mangarahara amin'izay ataon'izy ireo hampiroborobo sy hisolo tena ny marikao sy ny monitor ny hetsika ataon'izy ireo raha vao ekena ho ao anatin'ny programa ataonao izy ireo.
Insentif diso sonia
Ho an'ny ankamaroan'ny tantaran'ny orinasa afiliana, ny tambajotra dia nisolo tena ireo mpiara-miasa na mpivarotra tao anaty fifanakalozana tokana ary nandoa ny “sarany fampisehoana” hanaovana izany. Na dia tsy ratsy sy tsy ara-dalàna aza ity firafitra ity dia tsy manome toerana ho an'ny fanaraha-maso sy ny mizana marina izany, ka diso hevitra hatrany ny famporisihana. Ireo insentif tsy mifanaraka amin'ny laoniny ireo dia niteraka olana lehibe ihany koa, anisan'izany ny fisolokiana, ny fividianana mari-barotra, ary famonoana cookie.
Androany, na dia nivoatra sy matotra aza ny indostria, dia mbola misy ihany ny sasany amin'ireo insentif diso satria manome tombony ireo mpilalao marobe amin'ny rojom-bidy; ny fanakatonana ireo fihetsika ireo dia mety hidika hoe tsy ahazoana tombony firy. Soa ihany fa misy ny orinasa izay manjary manavaka bebe kokoa momba ny olona miaraka amin'izy ireo. Manomboka mandà ireo mpiara-miasa tsy manana lamosiny koa izy ireo, izay tsy misolo tena ny marika misy azy ireo ary manaiky ekipa. Ity dia fiarahabana miarahaba ary iray izay hanampy ny maodelin'ny Affiliate hahatratra toerana iray izay ahafahan'ny tsirairay mivoatra sy miara-miasa mamokatra.
Ny Nuances dia misy amin'ny indostria rehetra. Ny sasany dia mitarika tombony amin'ny fifaninanana izay ahafahan'ny hafa manafika ny marika iray. Amin'ny fisafidianana tsara ireo mpiara-miasa aminao, amin'ny fangatahana mangarahara avy amin'izy ireo, ary ny fahazoana antoka fa misy fifandraisana mazava eo amin'ny valiny azonao sy ny vola aloa aloanao, dia azonao atao ny mioty valisoa atolotry ny programa afisy ifangaroana .
Tags: AffiliateAffiliate-barotrafamonoana cookiedokotera ozDr. OzhosokaMehmet Ozshawn hoganshoemoneyfanolorana mari-barotrampiara-miasa tsy etika